मांसपेशी एक सेट लागि खेल पोषण - प्रोटिन
सुन्दर सिद्ध शरीर - सिद्ध एक जटिल र लामो बाटो। यो बाटो सबै बल र इच्छा छ, प्रत्येक पारित गर्न सक्दैन। सामान्यतया, सुन्दर र सही अनुपात मांसपेशी आवश्यक पर्दछ। यो यस्तो सरल प्रक्रिया छैन - यहाँ उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण र उचित, प्रशस्त खाना आवश्यक छ। त्यहाँ एक विशेष खेल छ दुबला मांसपेशी प्राप्त लागि पोषण। प्रोटिन - एक अद्वितीय छ जो उत्पादन यस प्रकार, को प्रतिनिधिहरु को एक प्रोटिनको स्रोत र एमिनो एसिड।
प्रोटिन - खेल पूरक को सबै भन्दा साधारण प्रकार को एक, सक्रिय सबै खेलाडीहरूलाई (केवल bodybuilders) द्वारा प्रयोग गरिएको छ। यो बस असम्भव छ - आज यो छ कि घर मा यस दबाइ को एक जार बिना एक पेशेवर Bodybuilder कल्पना गर्न गाह्रो छ। आखिर, मांसपेशिहरु को भर्ती लागि विशेष अवस्था हो। प्रोटिन तिनीहरूलाई को छ। तुरुन्तै यो कुनै पनि रसायन छैन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ! यो anabolic एजेन्ट, उचित मांसपेशी विकास को लागि आवश्यक हो कि पशु र बोट प्रोटीन को एक निश्चित संख्या समावेश आहार पूरक छैन। वास्तवमा, पछि तनाव, microtrauma र ऊर्जा कमी अन्तर्गत मांसपेशीमा खेती। शरीर मा पोषक को आवश्यक रकम को अभाव मा, तिनीहरूले तल सबैभन्दा ऊर्जा सिन्थेसाइजिङ, आफूलाई तोड्न सुरु गर्नुहोस्। प्रोटिन खुराक यस्तो प्रक्रिया रोक्छ, तर बरु, मांसपेशीमा तिनीहरूलाई बढ्न सुरु गर्ने सबै आवश्यक सामाग्री दिन्छ। यो यसकारण लागि प्रयोग गर्न उचित छ मांसपेशी भर्ती प्रोटिन र सुकाउने, समयमा खेलाडी राहत काम गर्दा।
पहिले, को प्रोटिन पूर्ण शरीर गरेर, मिश्रण पानी वा दूध (प्राथमिकताको दोस्रो) संग पतला छ किनभने अवशोषित छ। हामी सबै तरल खाना छिटो धेरै र कुनै न कुनै र कडा भन्दा बढी कुशलतापूर्वक प्रक्रिया छ भनेर थाह छ।
समय को एक न्यूनतम खर्च गर्दा, प्रयोग गर्न यसको सजिलो। तपाईं घरेलु पनिर 20-30 मिनेट को सम्पूर्ण प्याक खान गर्दा र एकदम अर्को जब तपाईं 2-3 मिनेट को लागि एक पौष्टिक हल्लाउने पिउन यो एउटा कुरा हो।
छांछ प्रोटिन उच्चतम जैविक मान छ। यस कारण, यो शरीर खाना अन्य प्रकार outperform प्रोटिन, यसरी शक्ति मांसपेशी सेट गर्न अपरिहार्य बन्ने आपूर्ति। प्रोटिन आवश्यक मात्रा र राहत आकार, समग्र मांसपेशिहरु बढ्छ।
यसलाई कसरी लिने?
वजन सेट लागि प्रोटिन सर्वश्रेष्ठ दुई प्रजातिहरू लिइएका छ: छेना र छांछ। पहिलो पचा लिया जान्छ र आसपास 5-6 घण्टा मांसपेशीमा मा, सबै समय सानो रकम तिनीहरूलाई प्रदान, यो थिए अवशोषित। राति यसलाई लिएर तपाईं एकदम दुबला शरीर ठूलो वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो प्रकार सही विपरीत छ - यो धेरै तेजी अवशोषित छ।
यो प्रोटिन मा "खानुहोस्" पहिले र प्रशिक्षण पछि हुनुपर्छ। विशेष गरी रोचक तपाईं एक खोल्न जब क्षण छ प्रोटिन-कार्बोहाइड्रेट विन्डो त्यहाँ एक मांसपेशी catabolism छ किन छ जो पोषक को एक तीव्र अभाव छ शरीर मा (30-40 मिनेट व्यायाम पछि) समय को एक निश्चित अवधि -। कुनै पनि प्रशिक्षण खेलाडी अभिन्न तत्व - त्यसैले सेट गर्न मांसपेशिहरु को प्रोटीन।
PureProtein: समीक्षा। PureProtein - खेल पोषण को निर्माता। यो कस्तो उपभोक्ताहरु लाग्छ?
बाल dryers फिलिप्स: सबै भन्दा राम्रो मोडेल को समीक्षा
को राखने प्रक्रिया: कदमले चरण
पुस्तकराख्नेदराज: यसको आफ्नै सुविधा र कार्यक्षमता सिर्जना
Chery धेरै, समीक्षा र सुविधाहरू
जर्मनी मा धर्म: विगत र वर्तमान
कसरी घर मा र चिकित्सा उपकरणहरू को मद्दतले एडी महमेज उपचार गर्न?